Faallo: Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Khayre iyo Icasilaadda Wasiirrada! – Kasmo Newspaper
Faallo: Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Khayre iyo Icasilaadda Wasiirrada!
Updated - November 16, 2017 12:27 pm GMT
London (Kasmo),Maalintii Arbacada, 15kii Nofember, 2017, waxaa xilkii iska casilay Drs Maryan Qaasim Axmad, Wasiirkii Wasaaradda Maareynta Masiibooyinka, oo ahayd Wasaarad curdan ah oo dhalatay xilli baahi badan loo qabo.
Wasiirka oo xil-ka-tegisteeda ka hadashay, waxay la xiriirisay qas iyo jahwareer shaqo oo aan laga fulin karin hawshii ay mas’uulka ka ahayd. Taas oo, marka lagu daro warka shaqo ka tagisteeda, su’aalo badan dhalinaysa.
Maryan Qaasim waxay hore xilal uga soo qabatay xukuumadihii ka horreeyay tan Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre, waxaana lagu tiriyaa xubnaha sida aadka ah ugu dhow Madaxweyne Farmaajo, oo ay mar guddoomiye ka noqotay Xisbigiisa Tayo.
Maryan waa Wasiirkii 2aad, oo Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Khayrre iska casila muddo bil gudeheed ah. Waxaa iyada ka horreeyey Wasiirkii Wasaaradda Gaashaandhigga, Cabdirashiid Cabdullahi Maxamed iyo Taliyihii Xoogga Dalka oo isku maalin xilka ka tegay!
Iyadoo taasi jirto, haddana dhinaca kale, waxaa dhowaan, hal mar lagu baraarugay jiritaanka shir abaabulkiisu ka socdo magaalada Nairobi, la qaban doono Maarso 2018.
Gaar ahaan waxaa dad badani argagaxeen markii ay soo baxday in shirku ku saabsan yahay Somali Oil, Gas and mining, oo sida qoraallo soo baxay muujinayaan, oggolaansho ka haysta Xafiiska Ra’iisal Wasaare Khayre.
Arrintaasi, Dawladda Soomaaliya waxay ku tahay wejigabax, waxayna nasiib-darro gaar ah ku tahay Ra’iisal Wasaare Khayrre, in mar kale, si gurracan loola xiriiryo arrin ku saabsan Somali Oil and Gas. Weliba markii ay soo baxday, 7dii bishaan Nofember , in Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ee Xukuumaddu uusan wax ka ogeyn arrinta shirkaas, uuna iska beriyeelay, kuna dhawaaqay joojintiisa.
Marka lagu daro dhacdadii Qalbi Dhagax ee dhammaadkii Agosto 2017, shirkii Kismaayo ee Maamul Goboleedyada, shaqo ka tagistaan u dambaysa ee Wasiir muhiim ahaa, ma waxay calaamad u noqon kartaa qalalaaso bilow ah ee Xukuumadda sannad jirka ku sii dhow?